गोलघरको कारागार मा प्रधानमन्त्रीको जीवन - Khabar Break | Khabar Break
०३० सालदेखि लगातार १४ वर्ष लामो यातनादायी काराबास भोगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोलघरको कठोर जीवनबारे लेखेको स्मृति हो, यो । यसअघि झापा आन्दोलनका उनका पाँच सहयोद्धालाई जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएको थियो । पोखरा जेलसारीको निहुँमा उनको पनि हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, त्यसवेला ओली मुस्किलले बाँचे ।
०३० असोज २३ गते रौतहटबाट पक्राउ गरी उनलाई वीरगन्ज जेलमा राखिएको थियो । वीरगन्जबाट काठमाडौंस्थित भद्रगोल जेल हुँदै केन्द्रीय कारागार ल्याइएको थियो । त्यसवेला अहिलेजस्तो विचार राख्ने र दल खोल्ने स्वतन्त्रता थिएन । राजनीतिक स्वतन्त्रता माग्नेलाई यसैगरी कैद गरिन्थ्यो र यातना दिइन्थ्यो । काराबासमा अत्यधिक यातनासाथ राखिएका नेतामध्ये ओली अग्रस्थानमा पर्छन् ।
कैदीहरूलाई यातनापूर्वक राखिने केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा व्यतीत आफ्नो जीवनबारे उनले ०४६ सालको परिवर्तनपछि संस्मरण लेखेका थिए । ‘युगदूत’ पत्रिकाको संस्मरण अंकका लागि लेखेर पनि हराएका केपी ओलीका संस्मरणात्मक रचनाको डायरी पछि फेला परे ।
डायरीमा लेखिएको उतिवेला प्रचलित ‘पागल’ शब्दलाई यहाँ परिवर्तन गरिएको छैन । मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूप्रति हामी संवेदनशील छौँ । लेखेको धेरैपछि भेटिएको उनैको पुरानो डायरीबाट यो अप्रकाशित संस्मरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
ति दिन ज्यादै कठिन थिए । विसं. २०३० मंसिर ११ गते मोहनचन्द्र अधिकारी र म जेलको पनि महाजेल गोलघरमा हालियौँ । गोलघर काठमाडौं केन्द्रीय कारागारको बीचमा छ । त्यहाँ नौवटा स–साना कोठा र एउटा फलामको पिँजरा छ । अरू बन्दीबाट अलग्याएर एकान्तबासको सजाय दिइने ठाउँ भएकाले प्रत्येक कोठामा एकजनालाई मात्र त्यहाँ थुनिन्छ ।
फलामका ठुल्ठूला चारपाटे डन्डीले घेरिएको, भुइँ र छानो बाक्ला फलामका पाताहरू भएको त्यस पिँजराको आकार नै यति सानो हुन्छ कि एकजनाभन्दा बढी थुन्न सकिने हुँदैन । चौडाइ डेढ फिटजति, उचाइ र लम्बाइ साढे तीन फिटजति भएको त्यस पिँजरामा थुनिनेले कहिल्यै पनि उभिन र खुट्टा पसार्न पाउँदैनन् । हामी गोलघरमा हालिँदा पूर्णबहादुर कुमाल पिँजरामा रहेछन् ।
उनी ज्यान मुद्दामा परेका र पागल भएर जेलमै दुईजना बन्दीहरूको हत्या गरेर पिँजरामा थुनिएका रहेछन् । जेलको नियम र प्रचलनअनुसार, जेलभित्र कसैले ज्यान मारेमा उसलाई गोलघरमा थुनेर सजाय दिइन्छ र गोलघरमा बसेर कसैको ज्यान मारे उसलाई पिँजराबासको सजाय दिइन्छ । जेलमा कुनै बन्दी पागल भयो भने उसलाई पनि अरू बन्दीहरूको सुरक्षार्थ गोलघरमा थुनिन्छ ।
जेलभित्र त्यहाँको हिसाबले कुनै गम्भीर अपराध मानिने काम गरेमा पनि गोलघरमा थुनिने गरिँदो रहेछ । तर, मोहनचन्द्र अधिकारी र मलाई गोलघरमा हालेका वेला भने त्यहाँबाट सबै पागलमध्ये दुईजना अलिक होसमा रहेको ठहरिएका र अलि कम पागललाई बाहिर निकालेर हामी दुईजनाका लागि ठाउँ खाली गरिएको रहेछ ।
गोलघरमा पस्नेबित्तिकै म आश्चर्यचकित भएँ । त्यस्ता ठाउँमा र त्यसरी पनि मान्छे थुनिन्छन् भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ । सानो गोलघरको कुनामा खुला पाइखाना ! ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै दुर्गन्धले बान्ता आउन खोज्यो । तर, अनिश्चित लामो कालसम्मका लागि त्यहीँ बस्नु थियो । म त्यहीँ छिराइएँ । पिँजरा र अरू कोठामा थुनिएका आठजना पागलहरूले म त्यहाँ लगिँदा आ–आफ्नो पाराले मेरो स्वागत गरे– कसैले अश्लील गाली गरेर, कसैले आफूले गरेको दिसाको झट्टी हानेर ।
ढोकाछेवैको कोठाका मीनराज पाण्डे भन्ने रहेछन् । उनी विनामुद्दा, पागल भएकाले परिवारको आग्रहमा सुरक्षार्थ त्यहाँ थुनिएका थिए । उनले भने मलाई छुट्टै पाराले स्वागत गरे । एकतमासको जोसमा उनी ठूलो स्वर निकालेर कराए, ‘जोन्सन्स् वार केनेडिज वार, कर्णाली आन्द्रेई ग्रोमिक हो । थ्यांक्स् भुट्टो, यू ह्याभ एलाउड थाई एयरलाइन्स् टु कम टु अस भाया ढाका ।
भित्ताभरि दिसा पोतिएको, भुइँभरि पनि दिसा छरिएको गोलघरको एउटा कोठा देखाएर मलाई त्यहाँ पस्न भनियो । कोठाको एउटा कुनामा खाल्टो रहेछ । त्यहीँ चर्पी रहेछ । त्यसबाट फोहोर निकालेर भुइँभरि छरिएको रहेछ । मैले सोधेँ, ‘के म यसै कोठामा बस्ने ?’
त्यो एउटा छुट्टै संसार थियो । पागलहरू आफ्नै तरंगमा डुबेका हुन्थे । कोही हाँस्थे, कोही रुन्थे । कोही भुत्भुताउँथे भने कोही चर्को आवाजमा कराउँथे, चिच्याउँथे । कहिले कोही रुँदा–रुँदै हाँस्थे भने कहिले हाँस्दा–हाँस्दै, रुन्थे । मोहनचन्द्र र मेरो लागि ठाउँ खाली गर्न दशजनामध्ये दुईजनालाई बाहिर जेलमा निकाले । बाँकी रहेका आठजना पागलमध्ये ज्ञानेश्वरका मीनराज पाण्डे, काभ्रेका केदार उप्रेती र ज्यानमुद्दामा धेरै वर्ष सजाय भोगिसकेका भोजपुरका वीरबहादुर कुमालको पागलपन अलिक बेग्लै प्रकारको थियो ।
उनीहरू फोहोर खेलाउनेसम्मको स्थितिमा भने थिएनन् । हाम्रा लागि कोठा ठीक गर्न बाहिर निकालिएका पागलहरूको स्थिति पनि ती तीनजनाको जस्तै–जस्तै रहेछ । तर, हामीलाई थप दुःख दिनका लागि पनि उनीहरू बसेका कोठाहरू नदिएर अवस्था ज्यादै बिग्रेका पागलहरूलाई ती कोठामा सारी हाम्रा निम्ति फोहोर कोठाहरू तयार पारिएका रहेछन् ।
गोलघरभित्र पसेपछि म कपडाको कुटुरो बन्द कोठाको एउटा कुनामा राखेर फलामे डन्डीको बार समाती उभिइरहेँ । मन अन्यमनस्क भावले भरिएको थियो । बाहिर गोलघरको आँगन थियो, सामुन्नेका कोठामा थुनुवा पागल र कैदी थिए । म तिनीहरूलाई एकतमासले हेरिरहेको थिएँ । त्यसैवेला गोलघरको बाहिरी ढोका फेरि खुल्यो र एउटा हुल भित्र पस्यो । त्यो हुलले मोहनचन्द्र अधिकारीलाई लिएर आएको रहेछ । गोलघरका पागलमा फेरि अघिजस्तै एउटा नयाँ तरंग आयो ।
शान्त बस्तीमा भुइँचालो आएजसरी एकचोटि जेलको वातावरण जर्‍याकजुरुक भयो । उनीहरू आ–आफ्नै पारामा केही कराए, तर पहिलेको भन्दा कम । मीनराज पाण्डे भने उत्तिकै उत्साहसाथ उत्तिकै उँचा स्वरले कराए । उनी वेला–वेला बतुराउँदा उही कुरा दोहो-याउँथे, ‘जोन्सोन्स वार, केनेडिज वार…।’ पागलहरूको कोलाहल र मीनराज पाण्डेको ‘बोकालाई यहाँ काट्न ल्याएको’ जस्ता कुराले मोहनचन्द्रलाई मनोवैज्ञानिक असर पा-यो । उहाँले मलाई देख्नुभएको थिएन ।
उहाँले गोलघरका कोठातर्फ हेर्न भ्याउनु नै भएको थिएन । मैले उहाँलाई बोलाएँ र पागलहरूका कुरातर्फ ध्यान नदिन भनेँ । उहाँलाई गोलघरको प्रवेशद्वारबाट पस्नेबित्तिकै दाहिनेतर्फको अर्थात् पूर्व लाइनको सबभन्दा दक्षिण कुनाको कोठामा थुनेर उनीहरू बाहिरिए । पश्चिम लाइनको सबभन्दा दक्षिणमा सार्वजनिक खुला चर्पी थियो र त्यो मोहनचन्द्रलाई थुनेको कोठाको सामुन्नेमा पथ्र्याे ।
मोहनचन्द्रलाई थुनेको कोठा गोलघरभरिमा सबभन्दा चिसो, अँध्यारो र साँघुरो थियो । हरेक कोठाका पल्लाछेउमा अलिक कुनातिर पाइखानाका लागि खाल्डा थिए र ती खाल्डाको निकास गोलघरबीचको सानो आँगनको माझमा रहेको ‘सेफ्टी ट्यांक’सम्म थियो । ‘सेफ्टी ट्यांक’का ढकनी राम्ररी बन्द नगरिएकाले पनि तिखो दुर्गन्ध आइरहन्थ्यो ।
गोलघर पस्ने बाहिरी ढोका र भित्री ढोकाको बीचमा त्यसै दिनबाट पालेपहरा राख्ने आदेश भएको रहेछ । त्यसकारण कामदारहरू सुत्न–बस्नका लागि त्यहाँ खाटजस्तो टाँड बनाउने कार्यमा जुटे । प्रवेशद्वारको भित्रपट्टिको ढोकामा ताला लगाइएको थियो । बाहिरी ढोका खुला राखेर उनीहरू काम गर्दै थिए । मोहनचन्द्र र म आपसमा कुरा गर्न थाल्यौँ ।
पागलहरू हामीलाई गाली पनि गर्दै थिए । उनीहरूको गालीले खासगरी हुलमा हामी दुईजना सद्दे भएकोमा उनीहरूमा चिढ थियो भन्ने बुझिन्थ्यो । नाइके कामदारले उनीहरूलाई ‘तँ, तिमी’ भन्थे । तर, हामीलाई उनीहरूले ‘तपाईं’ भनेकोबाट पागलमध्ये धेरैले हामी उनीहरूको कोटीमा पर्दैनौँ भन्ने राम्ररी अनुमान गरेका थिए । पागलमध्ये काभ्रेका केदार उप्रेती, जो गोविन्दनाथ उप्रेतीका भाइ हुन्, उनी अर्धपागल वा सिल्लीको अवस्थामा थिए ।
वीरबहादुर कुमाल पनि त्यस्तै–त्यस्तै अवस्थामा थिए । मोहनचन्द्र, मीनराज, वीरबहादुर, केदार र अर्को एकजना पूर्वपट्टिको लाइनमा अथवा मेरो कोठाको अगाडितिर पर्थे । अहिले नाम बिर्सेको एकजना पागल बीचको कोठामा बस्थे र उनको हालत पनि राम्रो थिएन । उनी होसमा थिएनन् । उनी अक्सर जोड–जोडले कराउने गर्थे ।
अपराह्नतिर हामी दुवैजनाको ढोका खोल्न कामदार आए र हामीलाई कोठाबाट निकालेर गोलघरको प्रवेशद्वारको भित्री ढोकासम्म ल्याए । बाहिरी ढोकाबाट बाहिरपट्टि त्यसवेला त्यसै जेलमा थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, बोधराज उपाध्याय (जनकपुर)लगायतका केही मित्र भेट्न आउनुभएको रहेछ । दुई–तीन मिनेट टाढैबाट उहाँहरूसँग देखादेख भयो ।
मोहनचन्द्र र म ०३० असोज २३ गते रौतहट जिल्लामा पक्राउ परेका थियौँ । पक्राउ पर्दा मोहनचन्द्रले खागीको पाइन्ट–सर्ट र चप्पल लगाउनुभएको थियो भने मैले पातला पाइन्ट–सर्ट र एकजोर पुराना चप्पल लगाएको थिएँ । हाम्रो साथमा भएका झोला, एक–एकवटा लुंगी, एक–एक जोर भित्री कपडा, केही कागजपत्र र कलम रौतहटका तत्कालीन प्रजिअ चन्द्रिकानन्द खरेलले हामीबाट गिरफ्तारीको दुई दिनपछि नै खोसिसकेका थिए ।
मंसिर ३ सम्म रौतहटमा प्रहरी हिरासतमा हामीलाई निर्मम यातनासाथ चिसो भुइँमा थुनेका थिए । त्यसवेला मसँग भएको बीस रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । मंसिर ४ गते वीरगन्ज जेलमा हालेर ८ गते काठमाडौं सरुवा गरेपछि मोहनचन्द्रलाई सेन्ट्रल जेलमा र मलाई भद्रगोल जेलमा थुनिएको थियो । मंसिर ८ गते बेलुका म भद्रगोल जेल ल्याइएँ । त्यहाँको आन्तरिक चौकीछेउको कोठामा दुईजना कामदारको कडा पहराभित्र मलाई तोकिएको खाली भुइँमा राखियो । मलाई एउटा सुकुल दिने सम्बन्धमा बन्दीहरूका बीचमा चर्चा चल्यो ।
त्यसवेला मैले एउटा कापी र डटपेन भने प्राप्त गरेँे, सुटुक्क । ‘अखबार’ भन्ने एउटा गद्य कविता लेखेँ । त्यो कविता कसरी–कसरी पछिसम्मै सुरक्षित रहन सक्यो । मौका मिल्दा मैले थुपै्र कविता, कथा र निबन्ध बाहिर पठाएँ । त्यो कविता पनि त्यसमध्येकै थियो । पछि पार्टीले साहित्यिक पत्रिका ‘युगदूत’ प्रकाशन गर्दा मेरो त्यो कवितासहित केही कविता र अर्को अंकमा एउटा कथा पनि छापिएछ ।
गोलघरका कठिन दिनमा लेखेका कविता घरिघरि झल्याकझुलुक स्मृतिमा आइरहन्छन् । मेरा कविता उम्दा थिए कि थिएनन्, म यसै भन्न सक्दिनँ । तर, कमजोर भने थिएनन् । गोलघरमा बिताएका दिन सम्झिँदा म त्यसवेला पाएको यातना मात्र सम्झन्नँ, त्यहाँ लेखिएका मेरा प्रिय कविता पनि सम्झन्छु ।
from : enayapatrika